बिचार / लेख - रचना : Archives - Janata Bulletin
नेपालमा प्रचलित विभिन्न चाडपर्वहरू मध्ये शिवरात्रि पनि एक हो। यो पर्व प्रत्येक फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथिमा मनाउने गरिन्छ । यस दिनमा शिवको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति भएको हुनाले शिवजीको जन्मदिनकै रूपमा मनाउने गरिन्छ। यसै दिन शिवजीको पार्वतीसंग विवाहा भएको हो भन्ने मान्यता ...
असोज ३० गतेको दिन थियो हरेक दिनझै बिहानै उठँे । घरमा आमालाइ फोन गरेँ । अनि राती मैले देखेको सपना बारे आमालाई जानकारी गराएँ । जुन सपना मैले २०६० सालदेखी आफू बिरामी हुनुपुर्ब सधै झै देख्ने गरेकी हुन्छु त्यो सपनाले ...
मानवले जीवनमा विभिन्न उदारचढाब र परिस्थिति झेल्नुपरेको हुन्छ । कतिपय मानिसले ती परिस्थिति र उदारचढावमा समान रहेर यात्रा गर्न नसक्दा मानिस आफ्नो गन्तव्यलाई भेटाउन सक्दैनन् । आफुभित्रका स्वभाविक गुणलाई पनि मानिसले सहज ढंगले नलिग्दा अफ्ट्यारो परिरहेका हुन्छन् । सरलता र ...
– सुभाष ज्ञवाली – पछिल्लो समय कोरोना भाइरसलाई समेत पछि पार्दै सिमा विवादको चर्चा चुलिएको छ । सामाजिक सन्जाल देखि लिएर सन्चार माध्यमहरुमा सिमा विवादको बारेमा कम बहस भएको हो कि भनेर प्रक्षेपण गरिएको अवस्थामा केहि सन्चार माध्यमहरुले यसलाई बहसको ...
निरु आचार्य “नवरश्मी ” – नौ महिना गर्वमा ,छ महिना काखमा र जिन्दगीभर मनमा राख्ने आमाहरुप्रती हामी चर्चा गरिरहेका हुन्छौं तर नदेखिने ति बुबाहरुका भूमिका गुमनाम रहेका हुन्छन् ।सधै देखिने खालका आमाहरुसङ्गका सम्बन्धहरु र भौतिक दुरि कायम गरेका बुबा संगका ...
के बेलाबखत तपाईं बाल्यकालमा फर्किएर हेर्नुहुन्छ ? कसरी रमाउनुहुन्थ्यो ? कसरी खेल्नुहुन्थ्यो ? साथीसँगी कस्ता थिए ? के खेल्नुहुन्थ्यो ? कुन कुराले फुरुक्क बनाउँथ्यो ? एकपटक बाल्यकालमा फर्किएर हेर्नुहोस्, तपाईं यसै रोमाञ्चक बन्नुहुनेछ । किनभने त्यसबेला गरिएका स-साना गल्तीहरु, बदमासी, ...
हरि पाठक क्षेत्री( देखेको कलम) गुल्मीको सरमुकाम तम्घास ,प्ररदेश ५को अस्थायी राजधानी वुटवल देशकैै मुटु काठमाडौंं लगायत अन्य अधिकांश रोजगारको शिलशिलामा अन्य देशमा पुगेकाहरू,पठनपाठन, जागिरेवाला लगायत सर्वसाधारणहरूको यतिबेला गाउँ फर्किने संख्या दिन प्रतिदिन बढ्न थालेको छ । बिश्वव्यापि रुपमा फैलिएको ...
के छ भगवान शिव प्रतिकको रहस्य ?
शिवलाई कल्याणकारी देवता मानिन्छ । सृष्टि निर्माणमा एउटै शक्तिले तीन वटा रुपहरुमा आफ्नो कार्य सम्पादन गरेको देखिन्छ । ब्रम्हाले सृष्टिको निर्माण गर्छन्, विष्णुले पालन-पोषण गर्छन् र शिवले सम्हार गर्छन् अर्थात निर्माणदेखि विनाशसम्म जगतको चक्र परम सत्ताद्वारा निरन्तर प्रकृतिमा चल्छ । ...
रङ्गको पर्व होली एवं फागु पूर्णिमा
चक्रपाणी डुम्रे (शास्त्री),जनता बुलेटिन – प्रत्येक वर्षको फागुन शुक्ल पुर्णिमा होली पूर्णिमा मनाइन्छ । यो पर्व नेपाल , भारत तथा अन्य राष्ट्र मा रहेका हिन्दूहरूको एउटा महत्वपूर्ण चाड हो । यो चाड वसन्त ऋतुको फाल्गुन महीनामा मनाइन्छ। होली रङ्गहरूको चाड ...
■ दीपेन्द्र पाण्डे – तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन यौनकाण्डमा मुछिए । आफ्नो सत्ता र शक्तिको भरपूर प्रयोग गर्दै आफ्नै कार्यालय सहयोगी मोनिका लेवेन्सिकीसँगको हिमचिम मिडियाले पस्केसँगै निरन्तर झुट बोलिरहे । राजनीतिक लोकप्रियताको खोल शक्तिको तमाम दुरुपयोग गर्दा पनि अमेरिकी ...